Notafihin'ny mpizahatany, novonoina, nohanin'ny bera noana teo am-pandehanana tany amin'ny National Park
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Notafihin'ny mpizahatany, novonoina, nohanin'ny bera noana teo am-pandehanana tany amin'ny National Park
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana Rosia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Ny valan-javaboary Ergaki dia toerana mety indrindra ho an'ireo mpitsidika maniry hankafy natiora mahafinaritra, fahitana ary fahitana lavitra ny fiaraha-monina rehefa mandeha mandritra ny areti-mandringana COVID. Ny fisakafoanana hariva ho an'ny bera noana dia nahatonga ity dia ity hahafaty sy ho lasa helo velona ho an'ny mpandeha an-tongotra 3 velona.
Niezaka ny ho tafavoaka velona ireo mpitsidika raha nanao dia an-tongotra nitsoaka nandritra ny 7 ora
eTurboNews namoaka ny lisitry ny Valan-javaboary mampidi-doza indrindra any Etazonia, saingy tsy misy na inona na inona afaka manakaiky ny zava-nitranga tamin'ny vondron'olona mpitsidika avy any Moskoa mitsangatsangana ao amin'ny Ergaki Nature Park, valan-javaboary iray any Siberia.
Ergaki dia tandavan-tendrombohitra iray any amin'ny Tandavan'i Sayan Andrefana any atsimon'i Siberia, Russia. Ny teboka avo indrindra dia ny tampon'ny Zvyozdniy. Ny Valan-javaboary Ergaki dia faritra arovana izay misy ny tandavan-tendrombohitra.
Ny toby rosiana iray avy any Mosko izay namaha ny tranolainy tao amin'ity valan-javaboahary Siberia ity dia novonoin'ny bera volontsôkôlà ary teo am-pizahana noho izany ny sakaizany.
Ilay mpizahatany izay nohanin'ity bera volontsôkôla mosarena ity dia fantatra amin'ny toerana antsoina hoe Yevgeny Starkov, 42 taona.
Niara-dia tamin'ny vondrona mpizahatany hafa avy any Moskoa izy ary nandeha an-tongotra namaky ny Valan-javaboary Ergaki malaza any Krasnoyarsk any atsimon'ny afovoany Russia.
Mpandeha an-tongotra telo ao amin'io vondrona io ihany no nahavita nandositra nefa tsy nisy ny kirarony. Nandeha fitsangatsangana naharitra adiny fito izy ireo, tsy nanana tongotra, ary nenjehin'ny bera bibidia sy mahafaty, mba hitady fanampiana.
Ny Valan-javaboary Ergaki dia nahazo fahitana an-tendrombohitra tsy manam-paharoa izay mipetraka ao afovoan'ireo tendrombohitra Wester Sayan mahafinaritra.
Isan-taona dia mpitsidika an'arivony maro no tonga any Ergaki hahita toetra madiodio mahatalanjona, gaga amin'ny lanitra feno voninkazo sy farihy madio mangarahara eny an-dohasaha, mankafy setrin'ny tampon-tampon-kavoana, famolavolana vatolampy mahavariana ary vista madiodio.
Miaraka amin'ny fahitana isan-karazany tafiditra ao anaty faritra kely, Ergaki Nature Park dia toerana mamirapiratra hiaina fitsangantsanganana, fitsangantsanganana, fiakarana, snowboard, cross-country, ary ski an-tendrombohitra.
Tonga ao amin'ity zaridaina mahafinaritra ity ny olona mitady fitoniana sy filaminana.
Ny fitantanana ny Park dia nandefa tao amin'ny tranonkalany: "Ny fitsangatsanganana any amin'ny valan-javaboary Ergaki dia hanome aingam-panahy anao hanao sary mahafinaritra be dia be ary hanome fiheverana tsy hay hadinoina."
Taorian'ity tranga nahafaty olona ity dia nakatona hatramin'ny volana Novambra ny valan-javaboary noho ny antony azo antoka.
Ny iray tamin'ireo sisa velona dia nilaza tamin'ny masoivohom-baovao iray any an-toerana fa nijery ny sakafon'izy ireo sakafon'izy ireo izy ireo talohan'ny nandosirany tany anaty ala taorian'ny fahitan'ny orsa azy ireo.
Nosamborin'ny minisiteran'ny ekolojia rosiana sy ny fitantanana ny valan-javaboary ilay biby ary novonoiny. Mitohy ny fanadihadiana momba ny toe-javatra niseho.
dolores Ruggiero hoy:
1 Aogositra 2021 amin'ny 17:11
tsy nisy nanana basy ve ????? ahoana no hidiranao amin'ny arealike tsy mitam-piadiana ?????